Wasiiro kormeerey xero lagu daryeelo carruur agoon ah – Radio Muqdisho
Wasiiro kormeerey xero lagu daryeelo carruur agoon ah
Wasirka Cadaalada iyo Wasiirka Amniga oo ay wehliyaan taliyaha ciidanka Asluubta iyo saraakiisha Asluubta ayaa maanta kormeerey xarunta taliska ciidanka, halkaas oo lagu xanaaneeyo carruur agoon ah iyo kuwo ku dacdareysanaa magaalada Muqdisho.
U jeedada kormeerka mas’uuliyiintan ayaa aheyd in deeq isugu jirta raashiin iyo dhar ah la gaarsiiyo carruurtaas si ay ugu ciidaan maadaama ay maalmo kooban uun ay inaga xigto ciida.
Mas’uuliyiintan maanta xaruntaasi kormeerey ayaa sidoo kale waxaa wehliyay saraakiil ka socota hey’adda ZamZam, ayagoo balan qaaday in daryeelka carruurtan.
Sareeye gaas Bashiir Maxamed Jaamac ayaa sheegay in carruurta halkan ku jirta ay yihiin kuwo taliska ciidanka Asluubta uu xanaaneeyo isla markaana ay u baahan yihiin in daryeel loo fidiyo.
Wasiirka amniga gudaha xukuumadda Soomaaliya Mudane C/rasaaq Cumar Maxamed ayaa ugu baaqay hey’adaha samafalka in ay caawiyaan carruurta aan heysan daryeelka ee ku magaalada Muqdisho, isagoo sheegay in dowladda Soomaaliya aysan kaligeed ku filneyd xanaaneynta carruurta.
C/laahi Axmed Jaamac oo ah wasiirka cadaalada ee dowladda Soomaaliya ayaa la dardaarmay carruurta derbi jiifka ah iyo kuwo kale in ay ku dadaalaan waxbarashada.
Magaalada Muqdisho ayaa waxaa ku nool carruur aad u fara badan oo aan heysan wax daryeel ah iyadoo taasina ay sabab u tahay carruurtaas oo qoysaska ay ka soo jeedaan ah kuwo sabool ah oo fara maran.
Barnaamijka Nugliyeerka Iran oo heshiis hor u dhac laga gaaray
Fadlan Caawi Ilma Yar oo Xanuun Darani Madaxa ka Haleelay oo ku Nool Magaalada Hargeysa “SAWIRRO”
Fadlan Caawi Ilma Yar oo Xanuun Darani Madaxa ka Haleelay oo ku Nool Magaalada Hargeysa "SAWIRRO"